Dubartoonni Sudaan heerumuuf jecha dhaqna qabachuuf dirqamu - BBC News Afaan Oromoo
Dubartoonni Sudaan heerumuuf jecha dhaqna qabachuuf dirqamu
Sudaanitti dubartoonni muraasni durbummaa qabdi jedhamuuf sirna gaa'ilasaanii dursanii dhaqna qabatu.
Harka caalaan isaanii wayita umriin isaanii ganna afurii amma kudhanii gidduu jirutti dhaqna qabatu.
Biyya hordoftootni amantii Islaamaa itti heddummaatan keessa jiraatan kanatti fiixe qaama saala dubartiirraa muruuf dhiphisuuf yaaluunillee jira.
Yoo misirroon dhaqna qabachuu filatte ogeeyyii dubartoota deessisanitu fiixee qaama saalaarraa muruudhaan deebisee qaama saalaa dubartoota(vagina) hodha.
Abbaa dhaqna qabaa shamarraniitti garaa jabaachuu dadhabe
Dhaqna-qabaa daa'ima waggaa lamaa galaafate
'Guyyoota hedduuf ammaan bayyanadhutti na dhukkube hiriyaa koo bira turuufin dirqame, amman natti wayyaa'utti haati kooyyuu akka bartu hin fedhun ture' jette dubartiin Mahaa jettee of waamtu. Maqaan kun dhugumaa miti, eenyummaashi dhoksuufi.
'Fincaa'uunis rakkooodha, guyyoota muraasaaf deemuullee hin danda'u' jetti.
Mahaan ji'a lama booda namticha amma tokko umriin ishii caalutti heerumuuf kana raawwatte.
'Akkan gaa'ila dura saalqunnamtii raawwadhe beeku beeknaan tasumayyuu nan amanuu kanaafi' jette.
'Akkan manaallee hin baane manatti na huggura, bilbilallee akkan hin fayyadamne na dhorka'
Dhaabbanni Biyyoota Gamtoomanii akka jedhutti, dubartoonni Sudaan harki 87 umriin isaanii ganna 14 amma 49 gidduu jiran dhaqna qabataniiru.
Mahaanis magaala guddoo biyyatti Kaartum keessatti hojjattullee dhaqna qabachuu hin dhiifne, mana narsii deessistuu tokkotti dhoksaan dhaqna qabatte.
Paawundii Sudaan 5,000 ( $110) kaffalteetu dhaqna qabatte.
Gaa'ila dura durbummaan aadaa baayee gatiin laatamuuf keessatti dubartoonni baqaqsaanii yaaluudhaan durbummaasaani suphisisuu. Kunis tishuu haphii 'hymen' qaama saala keessatti argamu saalqunnamtii duraan raawwatan dhoksuuf gargaara.
Yaaliin akkasii "hymenoplasty" jedhamu garuu ogeeyyii baqaqsaaanii wal'aananiin kan raawwatamu yoo ta'u, Biyya Sudaan keessatti baratamaa miti.
Ogeessi fayyaa wal hormaataa Dr. Saawsan jedhaman dhaqna qabaan biyyatti keessaa akka baduuf duula gaggeessu.
Qaamaa saalaa dubartii hodhuuf dhiphisuu yaaluunis tokkuma dhaqna qabadhumaa jedhani.
Koreen Wala'ansaa fayyaa biyyatti dhaqna qabaa dubartoota hin eeyyamuu, Kanaafuu hoospitaala biyyatti keessatti gochii akkasii hin raawwatamu.
Ogeettiin dubartoota deessiftu otoo kana raawwattu qabamtes mi'a ittin hojjattu jalaa saamuudhaan hojiirraas ugguramti.
Namoonni biyyatti keessatti dhaqna qabaan akka hafuuf duula gaggeessan ammayyuu jijjiramni akka dhufu abdatu. Ji'a darbe biyyatti keessatti seerri hawaasummaa akkaata dubartoonni hawaasa keessatti uffata uffachuu qabaniifi kofoo akka hin uffanne daangessu kaafamuu isaatu yaadatama.
Seerrii kun bara bulchiinsaa Omar al-Bashiir kan waggoota 30'n darban biyyatti hooggananiin hojiirra oole. Mormii hawaasa mudate booda al-Bashiir aangoorraa fonqolchamuusaatu yaadatama.
Daa'ima sababa dhaqna-qabaan Xaaliyaan keessatti du'e
Daqiiqaa 24 dura